Nnwom 60 NA-TWI - Ogye ho mpaebɔ - Woapo yɛn, - Bible Gateway
Nnwom 59Nnwom 61
Nnwom 60 Nkwa Asem (NA-TWI)
60 Woapo yɛn, Onyankopɔn, adi yɛn so; wo bo afuw yɛn nanso afei, dan w’ani kyerɛ yɛn. 2 Woama asase no awosow na woapae mu; afei sa n’apirakuru no, efisɛ, emu retetew. 3 Woama wo nkurɔfo ahu amane yiye; yɛtɔ ntintan sɛ wɔn a wɔabobow nsa.